Ciyaaryahan aan Lugo Dhan laheyn oo guul Taariiqi ah kasoo hoyiyay Orodka 400-ee Mitir (Daawo Sawirada) - iftineducation.com
aadan21 / August 7, 2012
iftineducation.com – Oscar Bstorius waa Orodyahan u dhashay Dalka Koonfur Africa waxa uuna kamid yahay Ciyaartoyda Dalkaasi u mataleysa Ciyaaraha Olombikada Aduunka ee xiligan kasoconaya Magaalada London ee Dalka Ingiriiska.
Oradyahankan waa Nin aan laheyn labada Lug waxaana ugu jira lugo macmil ah oo loo sameeyay, waxa uuna ka qeyb galay (400-ee Mitir) Orodka afarta boqol ee mitir isagoona la ordayay rag lixaadkooda uu dhan yahay kuna ordayay labadooda lugood.
Oscar Bstorius ayaana guul Taariiqi ah kasoo hoyiyay Tartanka Olombikada ADuunka kadib markii uu guul weyn oo lagu farxay ka gaaray Orodka afarta boqol ee Mitir ,waxa uuna galay Kaalinta Labaad ee Tartankaasi isagoona noqonaya ninkii ugu horeeyay aan lugo laheyn oo heerkaasi Orodka ka gaara.
Orodka afarta boqol ee mitir Waxaa kaalinta koowaad ka galay Oradyahanka Ugelan Santos ,waxaana kaalinta labaad soo buuxsaday Orodyahanka Curyaanka ah Oscar Bstorius oo orodka afarta boqol ee mitir ku dhameeyay 45.04 seconds ,ciyaaryahnka Kaalinta koowada galay ayaana ka horeeyay kaliya 45.04 ilbiriqsi ama seconds.
Orodyahankan Reer South Africa ayaa markii uu dhamaaday Orodka waxaa wajigiisa ka muuqanayay farxad aad u heer sareysay isagoo yiri ‘’ ma aqaan wax aan sameeyo ,ma farxaa mise waan ooyaa ‘’ Oscar ayaana indhihiisa laga dheehanayay Farxad hareesay Markii uu kaalinka labada galay.
Waa Markii ugu horeesay oo guul Ceynkaan ah uu keeno Ruux aan lugo dhan laheyn kana guuleesta Dad lixaadkooda dhan yahay ‘iaydoona Xusid mudan tahay in Ciyaaryahankan Cuuryaanka ah oo dhoor mar hore guulo waa weyn usoo hoyiyay Dalka South Africa uu matalayo.